डा दम्पत्ति बिरामी भएपछि हेरचाहका लागि कुरुवासमेत कोहि छैनन्
डा दम्पत्ति बिरामी भएपछि हेरचाहका लागि कुरुवासमेत कोहि छैनन्
साझा अनलाईन २०७५ जेठ १८ गते मा प्रकाशित 70 पटक पढिएको
एक रुपैयाँ पनि उपचार शुल्क नलिई २५ वर्षसम्म निरन्तर बिरामीको सेवामा समर्पित रहनुहुने एक जना चिकित्सक दम्पत्ति रोगले थालापरेपछि अहिले उनको हेरचाह गर्ने कोहि छैन् ।
श्रीमान्को भारतको सिलगढी स्थित आनन्दलोक अस्पतालमा आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको छ भने श्रीमतीको दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तर दुबै जनाको हेरचाहका लागि कोहि पनि छैन् ।
नेपालमा रहेर स्वदेशफिर्ती अभियान चलाइरहनुभएका भुटानी शरणार्थी नेता डा भम्पा राईको भारतको सिलगढी स्थित आनन्दलोक अस्पतालमा आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको छ । चार दिनअघि शल्यक्रिया गरिएको उहाँको हेरचाहका लागि कोहि आफन्त छैन् ।
उहाँकी श्रीमती उर्मिला राई आफैं बिरामी भएपछि उनको हेरचाह गर्ने कोहि पनि छैन् । डा. राईको शल्यक्रिया भएको र हेरचाहका लागि कोहि नभएको थाहापाएपछि किशोर राई आफैं हेरचाह र सहयोगका लागि आनन्दलोक अस्पताल पुग्नुभएको हो ।
दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि उहाँकी श्रीमती उर्मिलाको बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण यो परिवार अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा बाँचिरहेका छन । सन् १९९१ मा भुटानबाट शरणार्थी बनेर नेपाल भित्रिएका डा राईले त्यसयता बिरामीको निरन्तर निःशुल्क सेवा गर्दै आउनुभएको हो ।
त्यसबेला उहाँलाई पैसा केही होइन जस्तो लाग्थ्यो, अप्ठ्यारोमा परेकालाई साथ दिनु ठूलो धर्म हो, उहाँ सम्झनुहुन्थ्यो । तर, अहिले उहाँ आर्थिक अभावकै कारण जीवनमरणको दोसाँधमा हुनुहुन्छ ।
भुटानमा भएको आफ्नो सम्पत्ति शान, मान र दाम पनि एकैपटक छाडेर शरणार्थी बन्दै नेपाल आउनुभएको उहाँ पनि अन्य भुटानी शरणार्थी जस्तै सन् १९९१ देखि झापाको कनकाई नदीको बगरमा आएर बस्न थाल्नुभयो । त्यसपछि उहाँ दमकस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा पुग्नुभयोे । उहाँ दमकमा स्वास्थ्य क्लिनिक नै चलाएर बस्नुभएको थियो । निःशुल्क उपचार गरिदिए वापत उहाँ सबैका प्रिय हुनुहुन्थ्यो । नेपालको २६ वर्षसम्मको बसाइँमा उहाँले कहिले पनि पैसालाई महत्व दिनुभएन ।
श्रीमतीको पनि दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छोडेपछि तनावमा रहनुभएका डा राईको आन्द्रामा समस्या भएपछि शल्यक्रिया गरिएको छ । श्रीमतीको मिर्गाैला फेर्नलाई रु ६० लाखभन्दा बढी लाग्ने भएपछि उहाँ अहिले आर्थिक अभावले पिरोलिनुभएको छ । त्यसमाथि आफैँ थलिएपछि यो परिवारमा समस्यामाथि समस्या थपिएको हो ।
भुटानमा रहँदा भुटान सरकारका कन्सल्टेन्ट सर्जन हुनुहुन्थ्यो उहाँ । बंगलादेशको ढाका विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्नुभएका डा राई १९७५ देखि चिकित्सा पेशामा संलग्न हुनुभयो । सन् १९७९ देखि भुटान सरकारको कन्सल्टेन्ट सर्जनका रुपमा काम गर्नुभयो । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरु बिरामी परे, उनीहरुलाई कसले हेर्छ ? भन्दै शरणार्थीको पछि लागेर उहाँ नेपाल आउनुभयो ।
बहत्तर वर्षीय डा. राईलाई कहिले पनि पुनर्वासको लोभले छोएन । अझै पनि भुटान नै सम्झनुहुन्छ उहाँ । अहिले मृत्यु शैय्यामा रहे पनि भुटानीलाई स्वदेश फर्काउन चाहिरहेको उहाँकी श्रीमती उर्मिलाले बताउनुभयो ।
श्रीमती बिरामी परेदेखि टुलुटुलुमात्र हेरिरहने डा राई अचानक बिरामी परेपछि उहाँलाई स्थानीयवासीले उपचारका लागि भारतको सिलगढी पु¥याएका थिए । विगत सात महिनादेखि उनकी श्रीमती मिर्गौला समस्याका कारण ओच्छ्यान हुनुहुन्छ । उहाँको हेरचाह छरछिमेकले गर्दै आएका छन् ।
डा राईले भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती संयोजन परिषद् (विआरसिसी) स्थापना गरेर स्वदेश फिर्ती आन्दोलन चलाइरहनुभएको थियो । उहाँ विआरसिसीका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।
करीब सवा लाख मानिसलाई अढाइ दशकमा उहाँले कैयौँपटक उपचार गर्नुभयो । तर, उहाँ अहिले बिरामी पर्दा सबैबाट टाढा छन् । न्यूरो सर्जन भएकाले उहाँले भुटानको दरबारमा रहेर सेवा गर्नुभएको थियो । उहाँले राजपरिवारको समेत औषधि उपचार गर्न भ्याउनुभयो । गुवाहाटी मेडिकल कलेजमा समेत अध्ययन गर्नुभएका डा राईले नेपालमा रहेर धेरैपटक भुटानीलाई स्वदेश फिर्तीको आन्दोलन चलाउनुभयो ।
आन्दोलनकै क्रममा उहाँ गम्भीर बिरामी बनेपछि बेलडाँगी शिविरबाट बाहिर डेरा लिएर बस्न थाल्नुभयो । उहाँको अहिले डेरा भाडा तिर्नेसम्म अवस्था छैन । डा राईसहित नेपाली भाषी भुटानी अगुवा नेता रणबहादुर बस्नेत, दिलप्रसाद बस्नेत, भीम सुब्बा, हरिप्रसाद अधिकारी, एसपी सुब्बा, हरि क्षेत्री, टेकनाथ रिजाल नेपाल आउनुभएको थियो ।
आमाबुबासाथ नेपाल आएका डा राईका आमा विष्णुमाया राईको २०५४ सालमा र बुबा आइतराज राईको ११ वर्षअघि निधन भएपछि परिवारमा उहाँहरु दुईजना मात्र रहनुभयो ।
बिर्तासिटीमा उर्मिलाको उपचार
बिर्तासिटी अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी बमबहादुर बस्नेतको अगुवाइमा अहिले डा राईकी श्रीमती उर्मिलाको उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालका अध्यक्ष गोपालकुमार बस्नेतले उर्मिलाको उपचारमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्दै हप्तामा दुईपटक उहाँको मिर्गौलाको डायलोसिस हुँदै आएको जानकारी दिनुभएको छ ।
अस्पतालमा उपचाररत रहेकै बेला भेटिएकी उर्मिलाले भन्नुभयो, “श्रीमान् भारतको अस्पतालमा मृत्यु शैय्यामा रहँदा म यता बिरामीले छटपटाइरहेकी थिएँ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालले औषधि उपचार गरेर तिर्नै नसक्ने गुन लगाएको छ ।” उहाँले उपचारमा संलग्न चिकित्सकसहित अस्पताल प्रशासनलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
२०७५ जेठ १८ गते मा प्रकाशित